« Maso hafa mihitsy » -
AccueilTresaka« Maso hafa mihitsy »
« Maso hafa mihitsy »
11/07/2018 admintriatra Tresaka 0
Isika malagasy ve no mijery amin’ny maso hafa mihitsy, ka tsy mahita afa-tsy fanakianana tamin’ny ezaka vitan’ny fitondram-panjakana teo amin’ny sehatry ny fampandrosoana ? Vitsy ny teratany malagasy mba mahasahy mijoro fa mba tena nitondra fiovana ho azy sy ny ankohonany na ny fireneny ny ezaky ny mpitondra. Toa ny mifanohitra amin’izany no re etsy sy eroa. Toa ny fanatsatsoana sy fanasoketana be fahatany ilay fitondram-panjakana no avy hatrany harosony. Tokony hiova izany fomba fijery izany ka tokony hahasahy hiteny sy miaiky isika rehefa tsapa ny zava-bitan’ilay fitondram-panjakana. Io toe-tsaina kely io fotsiny no takiana amin’ny isam-batan’olona dia afaka manantena fiovana isika. Hataon’ny olom-pirenena ahoana moa no hanana risi-po handroso kanefa izy aza tsy resy lahatra fa nisy, ary tena nisy ny ezaka vitan’ny mpitondra azy.
Jereo fotsiny ny vahiny izay maneho ny heviny momba ny fahitany an’i Madagasikara. Rehefa mahatsapa izy ireo fa nisy ny ezaka vitan’ilay mpitondra, dia ambarany mazava tsara izany. Vao omaly izao no noraisin’ny filoham-pirenena teny Iavoloha i Elke Wisch solontena maharitry ny Unicef teto amintsika, izay handao an’i Madagasikara. Tsy nisorona mihitsy ity teratany vahiny ity nilaza fa tena tsapany ny ezaka nataon’ny fitondram-panjakana teo amin’ny sehatr’asa izay notantaniny. Raha izao no mitohy hoy izy dia ho lasa lavitra i Madagasikara.
Raha nihaona tamin’ny Filoham-pirenena tany Frantsa koa i Christine Lagarde tale jeneralin’ny Tahirimbola iraisam-pirenena nandritra ilay fihaonana ara-toekarena faha-18 tany Aix-en-Provence France, dia nankasitraka ny fahaiza-mitantana nasehon’ny fitondram-panjakana malagasy tamin’ny alalan’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Hentitra mihitsy ity tompon’andraikitra ambony ao amin’ny FMI ity nilaza fa efa azo tsapain-tanana ny fampandrosoana an’i Madagasikara.
Ramatoa Charlotte Ndiaye solontena maharitry ny OMS eto amintsika ihany koa dia tsy nisalasala nanambara fa fandresena lehibe ho an’i Madagasikara ny fahazoany ilay mari-pankasitrahana mikasika ny fandresen’i Madagasikara ny valanaretina Polio aty Afrika. Tsy ny firenena rehetra aty Afrika, hoy izy no nahavita ezaka goavana tahaka izao.
Tsy adala ireo tompon’andraikitra vahiny ireo nanambara fa misy ny ezaka vitan’ny fitondram-panjakana, ka tokony tohanana. Zareo vahiny moa avy hatrany dia milaza ny zava-misy marina fa tsy tahaka ny mpanao politika gasy mbola sahy manodina ny marina ho diso. Rahoviana vao sahy hijoro hiaiky ny zava-misy marina tahaka itony tompon’andraikitra vahiny mahasahy miteny ny ezaka vita teto, ireny mpanao politika gasy tsy mahalala afa-tsy ny fanatsatsoana ireny. Tokony hanana maso hafa mihitsy amin’izay ireo mpanao politika te hitondra firenena kanefa efa donton’ny fanaratsiana ny mpitondra.
Nisy fahatarana teo amin’ny telo herinandro mahery kely teo ny asa fanamboarana ny tobim-piantsonan’ny taksiborosy etsy Ambohimangakely (By-Pass). Voalaza fa vokatry ny fandalovan’ny rivodoza AVA farany teo no nampihatoana ny asa. Na izany aza anefa, ...Tohiny
Fanompoam-pivavahana teo Mahamasina : « TERORISTA » IRAY VOASAMBOTRY NY CIRGN